वाहक दिवालिया। "Transaero": गराउँछ वित्तीय समस्या एयरलाइन्स
जो घरेलू एयरलाइन्स उड धेरै ग्राहकहरु यातायातका दुनिया मा प्रमुख खेलाडीहरू मध्ये जस्तै "Transaero" पहिचान। संकट को क्षण 2014 मा उनको फिर्ता छोयो। यस कम्पनीको व्यवस्थापन सरकारबाट आर्थिक सहयोग को लागि लागू गरेको छ, तर अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन। उधारदाताओं थप गर्न आफ्नो विरोध व्यक्त गरेका छन् ऋण को पुनर्गठन, यस कारण लागि, कम्पनी नै भएको घोटाले को केन्द्र मा फेला परेन। यो साँच्चै "Transaero" दिवालिया छ? यो मुद्दा धेरै यात्रु गर्न चासो छ।
कम्पनी को गिरावट, धेरै प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरु हात हुन सक्छ "Transaero" को पतन पछि विमान उद्योग मा भारी परिवर्तन entail हुनेछ। तर दिवालिया भन्ने तथ्यलाई - "Transaero" साधारण नागरिकहरु सबै भन्दा राम्रो तरिका छैन प्रभावित हुनेछ।
को प्रधानमन्त्री मेदभेदेभ को बयान देखि, यो समस्या को मुख्य कारण धेरै विमान खरीद थियो निम्नानुसार। महत्वपूर्ण विकास को समयमा अतिरिक्त लागत miscalculation यो थियो उत्पादन थिए।
को "Transaero" को पतन
अव्यावहारिक वित्तीय नीति कम्पनी को आफ्नो पतन गरायो। त्यो राज्य ग्यारेन्टी प्रदान गर्न इन्कार गरे। परिवहन को पुस्तिका मन्त्रालय र कम्पनी द्वारा संकट देखि अर्थव्यवस्था मन्त्रालय कार्यक्रम निस्कनुहोस् स्वीकार्य छैन। यी कार्यहरू फलस्वरूप, "Transaero" कुनै पनि समर्थन बिना बाँकी थियो। स्थिति बाहिर तरिका लागि आशा मात्र बजार अर्थतन्त्रको सुधार सँग सम्बन्धित थियो, तर यो, दुर्भाग्य, हुन भएन।
क्षण बजार reorientation
"Gazprombank" को प्रमुख विश्लेषकहरूले भविष्यमा संभावनाहरु र घरेलू हावा परिवहन बजार को विकास को तरिका भविष्यवाणी गर्न खोजे। आफ्नो विश्लेषण देखि पछि आधिकारिक निकासी "Transaero" माथि केही आला सफलता मुक्त कि ठूलो रूसी कम्पनीहरु द्वारा साझेदारी गरिने छ।
कम्पनी "Aeroflot" यात्रु को एक महत्वपूर्ण आगमन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सबै यात्री, एक प्रतियोगी पछि आत्म-विनाश को 37% को लागि राज्य कम्पनी खाता मा यो आंकडा 50% वृद्धि हुन सक्छ। यो अवस्था लाभ उठाउन हुनेछ दोस्रो सबै भन्दा ठूलो विमान कम से कम, - S7। यो कम्पनी 12% आफ्नो यात्री यातायात वृद्धि गर्न सक्षम हुनेछ। शीर्ष तीन प्रमुख खेलाडी अन्तिम 10% को एक बजार आवाजमा "UTair" हुनेछ।
कारण रूपमा 5% अतिरिक्त हावा गठन पदहरू धेरै कुल यात्री को पतन। बजार मा "Transaero" को समापन पछि स्थिरता आउँछ।
नागरिकहरु लागि सम्भव नतिजा
बजार दिवालिया "Transaero" छोड हुनेछ पछि, साधारण ग्राहकहरु धेरै एयरलाइन्स को लाभकारी को स्तर मा एक सकारात्मक प्रभाव छ जो बोर्ड मार्फत शुल्क मा वृद्धि, आशा गर्नुपर्छ। यो सबै निकट भविष्यमा अपेक्षा गरिएको छ।
एक साक्षात्कार मा "Transaero" भिटाली Saveliev को निर्देशक उपलब्ध टिकट अब अपेक्षा गरिने बताए। एकाधिकार को टाउको कुनै टिकट को लागत कम लागि कुनै पनि स्पष्ट गरियो भने। एक "विजय" - बजार एक कम मूल्य मा टिकट बेच्न मात्र एक कम्पनी संचालित। "Transaero" निर्देशक द्वारा बताएअनुसार जबकि धेरै वाहक आफ्नो मूल्यहरु कम हुनेछ, तिनीहरूले घाटा भोग्नेछन् र दिवालिया भाग्य पुनरावृत्ति हुन सक्छ।
विशेषज्ञ Alekseya Komarova द्वारा आधिकारिक बयान देखि "Transaero" द्वारा संचालित उडानहरू को गैर-वर्दी redistribution, यो बजार खण्डको एकाधिकार को एक महत्वपूर्ण अनुपात "Aeroflot" प्राप्त गर्न सक्छ कि implies। पछि यो पर्यटन व्यवसाय एक गंभीर झटका सेवा, र यति संकट को एक राज्य मा मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरू लागि टिकट को लागत वृद्धि हुन सक्छ।
कम्पनी टिकट बिक्री गुमाए
डिसेम्बर 1 मा, संघीय एयर परिवहन एजेन्सी टिकट बिक्री बन्द गर्नको लागि "Transaero" एउटा सरकारी निषेधाज्ञा को नेतृत्व दिन निर्णय गरे। को गर्मी मा कम्पनी धेरै मोर्चों मा मूल्यहरू कम छ। यात्रुहरूले "Transaero" यसको ऋण संग अवस्था बारे धेरै चिन्तित। यसको दिवालियापन को कुनै वित्तीय संस्थाले पहिचान छैन देखि आधिकारिक टिकट सक्दैन Rosaviation बिक्री रोक्न।
मुद्रा टिकट "Transaero" को लागि फिर्ता हुनेछैन, र उडानहरू अर्को प्रमुख खेलाडी पूरा गर्नेछ - "Aeroflot"। टिकट को बिक्री सीमित गर्ने निर्णय यो Trasnportno-केिकलयिरग घर मार्फत गरिनेछ, स्वीकृत भएको छ। ऐन यो निर्णय रूपमा लामो रूपमा "Aeroflot" को सेना कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन हुनेछ। यो बिन्दुमा, यात्रु कम्पनी "Transaero" उडान रद्द कि प्रदर्शनमा जानकारी हेर्न सक्नेछन्। उडानहरू को उन्मूलनको फिर्ता यात्रु गर्न व्यय को लागत गर्नुपर्छ।
कम्पनी को विशाल घाटा
विगतमा 2015 विमान घाटा भन्दा एक ठूलो रकम को आकार वृद्धि - बारे 18.9 अरब rubles .. तर शुद्ध लाभ 13.1 bln को मात्रा मा प्राप्त। Rubles। यी तथ्याङ्कले देखि यो कम्पनी काम को एक पुरा वर्ष को लागि नकारात्मक गए कि निम्नानुसार। धेरै कर्मचारीहरु "Transaero" एक प्रतिष्ठित काम थिएनन्। यो यात्रु को गाडी को लागि कार्य को कार्यक्रम हाम्रो लागत तर केही ल्याए छैन भन्ने तथ्यलाई कारण छ। अवस्थित "Transaero" आफ्नो कम्पनी को भविष्यबारे चिन्तित को कर्मचारी, धेरै बैंकहरू ऋण को फिर्ती सक्रिय माग गर्न थालेका छन् किनभने। यो उधारदाताओं को एक ठूलो संख्या, जसलाई त्यो सभ्य रकम पर्छ को धेरै छ। 250 अर्ब को पट्टे संयोजनमा ऋण को कुल राशि, "Transaero"। RUB। लेनदारों र कम्पनी संग मुद्दा कार्यवाही वरिपरि जारी राखे। धेरै उधारदाताओं अदालत मा आफ्नो पैसा प्राप्त गर्छन। प्रमुख लेनदारों को सूची मा विमान Sberbank, VTB, Gazprombank, आईएफसी सूचीबद्ध।
"Transaero" को साझा
सेप्टेम्बर 2015 मा सरकारले 75% को राशि मा साझेदारी को "Transaero" को अधिग्रहण मा "Aeroflot" को लागि कल निर्देशन पाए, यो एकाइ लागत एक रूबल सीमित छ। तर केही कारणले, प्रस्तावित प्रस्तावको "Aeroflot" इन्कार गरे।
निम्न महिना, "Transaero" को साझा 17% वृद्धि भएको छ। प्रारम्भिक डाटा अनुसार, कुल प्रचार प्याकेजको 19% S7 शेयरधारकों खरिद गर्ने अभिप्राय। 1 सुरक्षाको लागि औसत लागत 11 rubles पुगेको छ। यो कारोबार दर्ता पछि S7 पुष्टि गर्न एक दृश्य संग Antimonopoly सेवा गर्न आवेदन पेश गर्न योजना।
आज कम्पनी को भाग्य
ऋण विमान "Transaero" मा डूब को वर्तमान भाग्य राज्य टाउको को स्तर मा हल गरिएको छ। राष्ट्रपति कम्पनी को वित्तीय कठिनाइ लागि जिम्मेवार ती स्पष्ट पहिचान गरेका थिए। यो अवस्था को दिल मा कम्पनी को आर्थिक र वित्तीय नीति सञ्चालन को विधिहरू सम्बन्धित मुद्दा हो। कारण आर्थिक संकट स्थिति को विकास मा एक निर्णायक भूमिका खेलेका।
- पाइलटहरूले, नेविगेटर, उडान परिचारक र अन्य कर्मचारी अझै विमान काम कर्मचारीहरु को रोजगार को वर्तमान स्थिति को मुद्दाहरू समाधान गर्न, यात्रु को परिवहन पूरा गर्न निकट भविष्यमा: यो कम्पनीको लागि मुख्य प्राथमिकता संकेत गर्नुभयो। चाँडै, धेरै प्रदर्शन मा लेखिएको देख्ने - "Transaero":। एउटा उडान रद्द गरिएको छ Aeroflot "र S7 समूह" सबै वर्तमान रुझान र आन्तरिक यातायात बीच साझा गरिनेछ। "
"Transaero" को पूर्व कर्मचारीहरु को समर्थन मा विशेष श्रम विनिमय
यस्तो विनिमय काम कर्मचारी बिना बाँकी पक्षमा सिर्जना भएको छ। पहिले यो "Aeroflot" आफ्नो कर्मचारीहरु मा 3100 मान्छे लिन तयार छ कि रिपोर्ट थियो। अब मात्र 2.8 हजार। उडान परिचारक स्वीकार गर्न इच्छुक रिपोर्ट। "Transaero" को कर्मचारी आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरु जारी हुनेछ।
वाहक अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व केही उडान लागू हुन्छ। राज्य को टाउको दायित्व को बहुमत "Transaero" को प्रमुख perpetrator रूपमा, सहायता राज्य गर्ने अधिकार "Aeroflot" प्रदान गर्न आग्रह गरिएको थियो। "Aeroflot" यो एक निश्चित लागि मुख्य दावेदार हो कि पहिले घोषणा , शेयर बजार कुनै पनि वित्तीय ग्यारेन्टी मा गणना छैन। तर यो विज्ञापन5अर्ब। RUB को मात्रा मा ऋण को रिकभरी को "Transaero" बाट माग उसलाई रोक्न छैन। judicially।
विदाई "Transaero" दिवालिया!
पुनर्वास लागि उपाय सम्पूर्ण प्रक्रिया र समय मा "Aeroflot" को नियन्त्रणमा कम्पनी को संक्रमण यो छ महिना भन्दा अलि बढी हुनेछ। यो सबै घरेलू हवाई यात्रा को अवस्थित मोडेल को संशोधन आवश्यक हुन सक्छ। आफ्नो एकीकरण प्रक्रिया सबै सम्झौताहरू अनुपालन राम्ररी राष्ट्रपति को प्रशासन, सँगै वर्तमान सरकार संग निगरानी हुनेछ। यो प्रसिद्ध ब्रान्ड स्वस्थ "Aeroflot" सबै आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरू छोडेर गायब। को प्रतीक र यी2कम्पनीहरु को लक्ष्य दर्शक व्यावहारिक नै छ किनभने यस्तो समाधान, एकदम तर्कसंगत छ। किन ती मजबूत छोड्न? यो एकदम तार्किक र व्यावहारिक छ। र धेरै यस्ता अवस्थामा संकट मात्र अन्दाज लगाउनु सक्छन् फेंक कसरी।
"Aeroflot" को छिटो - सबै भन्दा ठूलो रूसी हावा छिटो
रूपमा विमान 2050 मा हेर्नेछ
फ्रान्सेली विमान Aigle Azur
Aerodrome Krutitsy: विवरण र गतिविधिहरु
"Vnukovo" विमानस्थल। योजना विमानस्थल र टर्मिनल स्थान
A321, विमान - को workhorse
Elves च्याउ - भय र भूमिका गति फाइदाको
खिलौना तकिया के हो?
चिनियाँ बन्दागोभी। लाभ वा हानि
गायक Thalia: तस्बिर, जीवनी, वैवाहिक स्थिति
Caulking बहुलक: प्रकार, विनिर्देशों र समीक्षा एक सिंहावलोकन
"Interskol AM 120/1500": विशेषताहरु, फोटो र समीक्षा
Movenpick रिज़ॉर्ट सामा बे5* (मिश्र / सोमा बे): फोटो, मूल्य र होटल समीक्षा
प्रतिरक्षा प्रणाली को अंगहरु। प्रतिरक्षा प्रणाली समारोह
घर मा पर्दे कसरी सी गर्न
फोटो र समीक्षा: वयस्क र बच्चाहरु को लागि सेन्ट पीटर्सबर्ग मा आकर्षण
बाल लाभ। कागजातहरू र सुविधाहरू
फूल Isolde। "Skyrim" mod